Hypernet: Tubada Awoodda Xisaabinta ee La Kala Dhex-dhexaadinayo ama Iibso Kaaga | Martech Zone
Hypernet: Taabo Awooda Xisaabinta ee qarsoon ee qarsoon ama Iibso Kanaga
Jimcaha, Agoosto 17, 2018 Arbacada, Agoosto 15, 2018 Douglas Karr
Tikniyoolajiyadda loo yaqaan 'Blockchain technology' weli waa bilow, laakiin waa wax xiiso leh in la arko hal-abuurnimada ka socota hareeraheeda hadda. Shabakadda waa mid ka mid ah tusaalooyinkaas, si toos ah ugu fidinaya awoodda xisaabinta qalab kasta oo laga heli karo shabakadda. Waxaad ka fekereysaa boqolaalka milyan ee CPU-yada ah ee fadhiya saacado yar saacad markiiba - wali isticmaalaya xoogaa xoogaa ah, wali waxay u baahan yihiin dayactir, laakiin asal ahaan lacag luminta.
Waa maxay Hay'ad iskeed isu maamusha (DAC)?
Shirkad madaxbannaan oo baahsan (DAC), waa urur lagu maro qawaaniin lagu qeexay barnaamijyada kombiyuutarka ee loogu yeero qandaraasyada smart.
Cusbooneysiinta aasaasiga ah ee Hypernet ma aha qaybtooda silsiladda; waa nooca-silsiladda ka-baxsan barnaamijyada 'DAC'. Qaabkani wuxuu suurtogal ka dhigayaa in lagu wado xisaabinta isbarbar socda ee shabakad firfircoon oo la qaybiyey, dhammaantood qaab qarsoodi ah oo qarsoodi ah. Hypernet wuxuu isu keenaa aalado wuxuuna u adeegsadaa xalinta dhibaatooyinka dunida dhabta ah.
Shabakadda wuxuu abaabulaa aaladaha iyo shaqooyinka shabakada adoo adeegsanaya jadwalka xannibaadda. Waxay si otomaatig ah ula jaanqaadaysaa baahiyaha iibsadaha adeeg bixiyeyaasha saxda ah, waxay hubisaa in shaqooyinka loo dhammeeyo sida ugu macquulsan uguna macquulsan, waxayna ka caawisaa ilaalinta amniga iyo isku halaynta. DAC waxay adeegsaneysaa nidaam calaamadeyn si loo hubiyo in kheyraadka ay ujiraan sida loogu baahan yahay macaamiisheeda, oo ay kujiraan:
Isugeynta - Iibsadayaasha iyo iibiyeyaashu waa inay ku xidhaan dammaanad si ay u dhammaystiraan shaqooyinka xisaabinta. HyperTokens waa dammaanad. Iibiyaha ayaa dammaanad ka qaadaya qalabkooda halka iibsadayaashu ay lacagtooda gelinayaan qandaraaska casriga ah xagga hore. Shabakad leh jilayaal aan la aqoon, damaanad qaadku wuxuu u keenayaa nabadda maskaxda iibsadayaasha iyo kuwa wax iibiya.
Aqoonsiga - Sumcadda adeegsadaha ayaa sii kordheysa iyada oo ay tahay bixiye xisaabeed lagu kalsoonaan karo oo mas'uul ah iyo iibsade xisaabeed, sumcaddana si joogto ah ayey ugu jirtaa xannibaadda. Sumcadda adeegsadaha ayaa kordhisa suurtagalnimada kaqeybgalka shaqooyinka xisaabinta.
lacagta - HyperTokens waa lacagta macaamil ganacsi taas oo u saamaxaysa iibsiga iyo iibinta xisaabinta shabakadda.
Macdanta Helitaanka - Shakhsiyaadka ayaa qarxin kara HyperTokens inta ay sugayaan shaqooyinka xisaabinta, iyada oo kaliya laga heli karo hoolka. Tani waxay dhiirrigelinaysaa dadka isticmaala inay ku soo biiraan shabakadda oo ay ka dhigaan qalabkooda. Inta ay ku sugan yihiin hoolka, adeegsadayaashu waxay la tartami karaan aaladaha kale ee bilaa camalka ah si ay u ogaadaan inay runti yihiin khadka tooska ah. Haddii ay ku guuldareystaan ​​caqabad heshiiskooda dammaanadda waxaa ururiya tartame. Qaddarka astaamaha loo heli karo macdanta ayaa hoos u dhacaya muddo ka dib, sidaas darteed qalabka diiwaangelinta hore wuxuu kasbadaa calaamadaha ugu badan.
Maamulka baahsan / Codeynta - Noodhadhku waxay ka qaybgalaan loolan iyo jawaab waxaana lagu dhiirrigeliyaa inay gacan ka geystaan ​​ilaalinta tayada shabakadda, iyo ka saarista jilayaasha xun. Guntin kastaa nabarro node kale oo ku jira qaab caqabad / jawaab si loo ogaado haddii ay runti daaran yihiin markay leeyihiin waan daarnaa. Isbedelada waaweyn ee shabakada waa laga codeyn karaa, iyadoo codkaaga lagu miisaamayo qadarka HyperTokens ee aad hayso.
Shabakadda waxay asal ahaan u sameysay kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee ugu weyn adduunka iyada oo la adeegsanayo awoodda xisaabinta ee aaladaha qarsoon. Marka la eego shuruudaha layman, taasi waxay ka dhigan tahay mar kasta oo aaladaha sida laptop-yada, taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada aan la isticmaalin, Hypernet ayaa ka faa'iideysan kara awooddaas, sidaas darteed boggag internetku uma burburaan sababo la xiriira culeyska serverka. Waxa intaa ka sii badan, maaddaama awooddan la qaybiyay oo aan baahsanayn, waxaa jirta fursad aad uga yar in xasaasi, xog shakhsiyadeed oo la ururiyo inta lagu jiro macaamil ganacsi eCommerce ay waxyeello gaarto.
Tags: DACShirkad madaxbannaan oo baahsanxisaabinta baahsanshabakad
Aynu Lacag Sameysano: 8 Dariiqo Oo Loogu Bedelayo Iibinta Isku Socodka Baraha Bulshada
Snowflake wuxuu sharaxayaa sida ay ugu badaleen iibintooda Suuq Xisaab Ku saleysan #CONEX